Opinions & Discussion » စိတ်ပြောင်းမှ အိတ်ဖောင်းမည် Mindset	11
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆိုတော့။
@QUIL@ says: ပျတနာကို နျူဒတ်​​ပေါင်းဖို​ဆောက်​ပီး ရှာပြန်​ဘီ
မင်း ခန့် ကျော် says: mbt ဂယော ယွေးဂေါက်ပွယ်ဝန်မှါလားးး
kai says: ဆိုတော့..
ဒေါ်စု၏စိတ်ကို.. ကြိုမမြင်နိုင်သူများမှာ.. ရှစ်ပြူး.( ရှစ်ပူးမဟုတ်) ရှစ်လေးလုံးအကြောင်းပြု.. ပြူးထွက်နေသူများသာရှိသည်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဆိုတော့.. အာ့ ကြောင့်ဂို တမင်စောင်းတုတ်တာ…. မခံနိုင်ဝူး ကြောင့်ဘက်က … ကွကိုယ်ခံ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကြောင်တောင် အသံပြောင်းသွားသလားလို့ ထင်မိတယ်။
ဗွားဒေါ်ကို ဦးဝင်းတင်လို ဝေဖန်ရဲသူရှိစေချင်ရင် အမောင်ကြောင် ရောက်ရာအရပ်က အမြီးမတန်းပဲ (ရှိနေတဲ့အမြီးဖြတ်ပစ်ပြီး) အမြန်ဆုံးသာ ပျံလာဗာဒေ့ါ………… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .နိုင်မည်သေချာ..သို့သော်…
မြစပဲရိုး says: စိတ် ကို မနဲ ချုပ် ထားရ တယ်။
မြစပဲရိုး says: ဒီလောက်တောင် ဖြစ်နေလဲ ဟယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: တီတီလော်ဗီမြ မေးခွမ်း ဖြေရရင်.. ခုချိန်ဆို ဒီမိုကရေစီရလို့ စစ်တပ်တောင် အာဏှာပျံသိမ်းတော့ မလှားဗဲ။ အဲလောက် အဲလောက် မြန်မှာ…။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပယ်မဲ+ဖယ်မဲ